Kobo Aura Fanontana 2, tsy nampoizina avy any Kobo | Ireo mpamaky rehetra
E-boky mora vidy
EReader tsara indrindra
Kobo Aura Fanontana 2, tsy nampoizina avy any Kobo
Joaquin Garcia | | mpamaky, kobo
Zava-dehibe ho an'ny tovolahy tao Kobo ny omaly ary koa ho an'ireo izay mitady eReader vaovao satria eReaders roa mahaliana no natolotra ho an'ny tsena, tsy ho an'ny endriny na ny habeny ihany fa ho an'ny vidiny ihany koa. Nanantena isika rehetra ny Kobo Aura One, saingy tsy nahafantatra na inona na inona izahay momba izany Kobo Aura Fanontana 2, eReader nentim-paharazana manana anarana ratsy, na farafaharatsiny izay resahina ankehitriny.
Ity fitaovana ity dia manana efijery 6 santimetatra, habe iray izay lavitra ny 8 santimetatra fa mifanaraka amin'ny eReaders hafa toy ny Kindle Paperwhite 3, ny Cervantes 3 na ny Kobo Glo HD mihitsy. Ankoatr'izay, maro no mihevitra an'izany Ny Kobo Aura Edition 2 dia fanavaozana ny Kobo Glo HD.
El Kobo Aura N236-KU-BK-K-EP ...Kobo Aura Edition 2 ″ /] dia manana efijery 6-inch miaraka amin'i Teknolojia taratasy, efijery mikasika ary miaraka amin'ny hazavàna, mba ho marimarina kokoa amin'ny teknolojia ComforLight sy ny vahaolana amin'ny 1024 x 768 teboka; fa amin'ity tranga ity dia tsy mitovy ny hakitroky ny pixel isaky ny santimetatra toy ny amin'ny Kobo Glo HD, ny Kobo Aura Fanontana 2 dia manana 212 ppi. Kely lavitra noho ny Kobo Glo HD.
Kobo Aura Edition 2 dia hizara ny endrika miaraka amin'ny Kobo Aura One
Ny famolavolana ny Kobo Aura Edition 2 dia mitovy amin'ny Kobo Aura One, fa amin'ny refy, ity dia 159 x 113 x 8,5 mm ary 180 gr. Mahagaga izany satria manana lanjany lehibe nefa mizara famolavolana amin'ny eReader iray hafa, zavatra izay tsy niseho nandritra ny fotoana ela teo amin'ny Kobo eReaders, izay samy nanana endrika hafa.
Mikasika ny rindrambaiko sy ny endrika, ny Kobo Aura Edition 2 dia hitovy amin'ireo zokiny lahy, ao anatin'izany ny mety hindrana ebook amin'ny alàlan'ny Overdrive. Kobo Aura Edition 2 dia tsy hanana slot ho an'ny karatra microsd, araka izany ny 4 Gb fitehirizana anatiny dia zava-dehibe.
Ny vidin'ny Kobo Aura Edition 2 dia hitoviana amin'ny Kobo Glo HD, saingy manodidina ny folo dolara kosa dia, izany hoe, 119 dolara eo ho eo. Vidiny ambany ho an'ireo izay afa-po amin'ny eReader toy izany, saingy mandritra ny folo dolara dia mety ny misafidy ny Kobo Glo HD, izay manana efijery misy vahaolana tsara kokoa.
Na izany na tsy izany, na dia maro aza no hisafidy ny Kobo Aura One, Ny Kobo Aura Edition 2 dia safidy tsara ho an'ny maro, na ho an'ireo mitady vidiny ambany sy ho an'ireo mitady hanana fahefana amin'ny eReader-ny.
Kobo Aura N236-KU-BK-K-EP ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » Hardware » mpamaky » Kobo Aura Fanontana 2, tsy nampoizina avy any Kobo
Ireo mpamaky eReaders tsara indrindra
Araraoty ny fotoana mety ary mahazoa ny sasany amin'ireo eReaders tsara indrindra eny an-tsena amin'ny vidiny tena manintona
8 hevitra, avelao ny anao
alfredo gutierrez dia hoy izy:
Nividy iray tao amin'ny FNAC any Barcelona aho ary mbola tsy afaka nanao na inona na inona tamin'izany. Heveriko fa ny FNAC dia nanao asa ratsy tamin'ny fanovana marika fa tsy fananany.
Mamaly an'i alfredo gutierrez
Te-hanova ny mpamakiako aho ary miahiahy eo anelanelan'ny roa, ity ny kobo aura fanontana 2 na ny Tagus Iris 2017, ny fisalasalako dia tsy noho ireo endrika azony vakiana, noho ny olan'ny fiantohana, azoko kokoa fa ny kobo dia tsy maintsy nandefa azy ireo tany Espana sao nisy lesoka io, saingy tsy haiko raha tena toa izany. Iza no mpanoro hevitra anao mba hividianako azy roa?
Seb dia hoy izy:
Tsia, miaraka amin'ny Kobo, raha misy tsy mahomby anao dia ovain'izy ireo mivantana ao amin'ny magazay, tsotra be ... Eo anelanelan'ny roa, tsy misy isalasalana fa ny Kobo, betsaka kokoa ho an'ny atiny fa tsy ho an'ny fitaovana. Izay rehetra misy amin'ny nomerika dia misy Kobo, tsy misy ifandraisany amin'ny Tagus na BQ, indrisy ...
Mamaly an'i Seb
chiry dia hoy izy:
Azoko atao ve ny maka tahaka sy mametaka boky amin'ny pc?
Mamaly an'i chiry
bokyXfree dia hoy izy:
Tsy nanandrana tamin'io modely io aho, fa miaraka amin'i Aura taloha, tsy misy olana. Mampiasa Caliber aho amin'izany (caliber-ebook.com) ary mandeha tsara izy io.
Mamaly amin'ny bokyXlibre
Ity ebook ity dia mitovy amin'ny kobo Glo 2012 amin'ny anarana hafa. Na ny teknolojia mikasika aza dia infrared, izay miverina miala amin'ny capacitive, sa tsy izany?
Nanana olana tamin'ilay Aura aho, nentiko tany amin'ny fnac, nalefany tany amin'ny serivisy teknika ary tao anatin'ny herinandro dia nandefasan'izy ireo ahy vaovao. Serivisy tonga lafatra.
hace 4 taona
Novidiko ny kobo aura 2 satria handeha hizaha tany aho ary amin'ny fahitako azy dia diky ara-bakiteny, ho sarotra amiko ny mankafy ny famakiana an'io zavatra io. Tena miadana izy io, toy ny miverina amin'ny fanombohan'ny solosaina ary mamindra boky izay milanja k vitsivitsy fotsiny. Ny lahasa tsotra amin'ny fikajiana izay boky anananao na ny fandaminana azy dia miadana sy manelingelina, mendrika ny fiasan-dàlana, misosa ianao ary misafidy zavatra, mandeha amin'ny fahatarana mahatalanjona izany raha ampitahaina rehefa mikasika ny efijery ianao. Ireo pejy, ny lahatsoratra, dia tsy mifanaraka amin'ny haben'ny efijery ary mila milalao amin'ny zoom ianao, izay mendrika ihany koa, tsy azo atao ny mampitombo ny isan-jato kely, ary asa averina isaky ny pejy izany. mihodina! izao dia hipoitra fa ny iray aorian'ny 20 taona mampiasa gadget elektronika dia fandavana alohan'ity mpamaky kobo ity. Mifanohitra amin'ny tsiranoka fotsiny ilay izy, mankany amin'ny google aho ary mitady toerana hametrahana an'io hevitra fampitandremana io ho an'ny mpividy amin'ny ho avy. Ampiasao 100 € € izany shit !!!!
Voasakana ny BQ Cervantes Touch Light
Fampitaovana Kindle, inona ireo eBook azonao sokafana amin'ny mpamaky Amazon?
Fitsapana azo henoina Amazon maimaim-poana: Audiobooks 90.000+
Atombohy ny fitsapana